IKolkata, phakathi kwamadolobha amahle kakhulu eNdiya | Ukuhamba kwe-Absolut
IKolkata, phakathi kwamadolobha amahle kakhulu eNdiya
I-Calcuta, inhlokodolobha yangaphambilini yeBritish India, isagcina obunye bobukhazikhazi obudala, obukwenza idolobha elihlukile kwamanye amadolobha amakhulu ezweni. Nanamuhla isalokhu iyinhlokodolobha eziqhoshayo yezwe laseWest Bengal nenhliziyo yamasiko e-India.
Into enhle ngokuvakashela iCalcutta kumhambi wasentshonalanga ukuthi uzothola kukho konke okushiwo yiNdiya, kepha futhi uzothola okuningi. Futhi ukuthi kuleli dolobha lapho kuhlala khona abantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu kukhona abaningi umlando, ubuciko, isiko nobumnandi.
IKolkata futhi idolobha lokuqhathanisa. Kuwo, izigodlo nezindlu zikanokusho zihlala ndawonye nezinye zezindawo ezihlupheka kakhulu emhlabeni, lapho abadumile Umama Teresa yathuthukisa umsebenzi ongakhathali wokusiza amashumi eminyaka.
Kepha ngaphezu kwakho konke, iKolkata iyindawo ethokozisayo engashiyi muntu engenandaba. Lezi yizona ukuvakashelwa okubalulekile:
1 Ithempeli laseDakshineswar
3 UMaidan noVictoria Memorial
4 I-Belur Math
5 Okunye ukuvakasha okubalulekile eCalcutta
Esinye sezakhiwo ezinhle kakhulu futhi ezihehayo ezweni. I- Ithempeli laseDakshineswar Kunikezelwa ku- unkulunkulukazi uKali, ihlale igcwele abazinikeli nabavakashi.
Ithempeli limi osebeni lwe- umfula hooghly. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX ngesinyathelo se-philanthropist URani Rashmoni. Isakhiwo sayo sidonsela ukunakekela emibhoshongweni yayo emikhulu eyisishiyagalolunye. Kakade ngaphakathi egcekeni elikhulu kuvulwa lapho abathembekile bangakhonza futhi baphakamise imithandazo yabo ezithombeni ezinkulu zemabula ezimhlophe zonkulunkulu bamaHindu abanjengoShiva, uVishnu noKali.
Phansi kwethempeli kukhona ghathi, izinyathelo ezingcwele ezehlela osebeni lomfula.
Umnyango wethempeli laseDakshineswar umahhala, mhlawumbe lokho kuchaza ukuthi kungani kuhlala kugcwele abantu.
Kwabaningi, lesi yisithonjana esihle sedolobha. Yize igama layo elisemthethweni lingu- URabindra Setu, wonke umuntu oseCalcutta umazi ngegama eliqanjwe ngamaNgisi: Ibhuloho laseHowrah. Yavulwa ngo-1943 ukuhlinzeka idolobha ngokutholwa idolobha elingumakhelwane iHowrah, lapho kuthathwa khona igama lalo.
Ibhuloho laseHowrah eKolkata
Lesi sakhiwo esimangalisayo sensimbi sisekela isiminyaminya: izimoto ezingaba ngu-150.000 90.000 kanye nabahamba ngezinyawo abangaphezu kuka-217 ngosuku. Ubukhulu bayo bumi kanje: amamitha angama-90 ubude namamitha angama-XNUMX ukuphakama. Ebusuku kukhanyisiwe kunikeza umbukwane omuhle kubantu baseCalcu.
UMaidan noVictoria Memorial
Ipaki ebaluleke kunazo zonke edolobheni, eyaziwa ngezikhathi ze-colonial njenge IGrigade Parade Ground. Kuyi-esplanade enkulu enezindawo zezihlahla notshani enkabeni yeCalcutta. Yindawo ekahle yokubalekela ukuphithizela kwemigwaqo yedolobha, izivakashi ezingaba namandla kakhulu kuyo.
Abadlali bekhilikithi eMaidan eCalcutta, ngemuva kune-Victoria Memorial
Phakathi kwezinye izinto, eMaidan Park uzothola okuthandwa kakhulu I-Eden Gardens Cricket Ground nenkundla yomjaho yaseCalcutta.
Kepha ngaphezu kwakho konke, ekugcineni kwepaki kumi isakhiwo esihle se- ISikhumbuzo seVictoria, itshe lesikhumbuzo lokuhlonipha iNdlovukazi uVictoria ngemuva kokushona kwakhe ngo-1901. Ingaphakathi lalo ligcina umnyuziyamu lapho kuboniswa khona imidwebo kawoyela ngempilo yendlovukazi.
Okunye okumele ukubone eCalcutta ngokungangabazeki ithempeli lase I-Belur Math. Akukhona nje noma yiliphi ithempeli, kodwa elikhetheke kakhulu, ngoba kuyi inhliziyo yeRamakrishna Movement. Into ephawuleka kakhulu ngokwakhiwa kwayo ngukuhlangana kwayo okungenakwenzeka kobuciko bobuKrestu, ubuSulumane, ubuHindu nobuBuddha. Futhi ukuthi abakhi balo babehlose ukuthi leli thempeli laliwuphawu lobunye bazo zonke izinkolo.
Ithempeli le-eclectic le-Belur Math
Okunye ukuvakasha okubalulekile eCalcutta
Izindawo ezithakazelisayo ongazibona nokuzithola eKolkata azipheli. Kungcono ukuthatha kalula futhi unikele usuku ngalunye lokuhlala kwakho ukuhlola indawo ehlukile yedolobha. Isu elihle, isibonelo, ukubheka imikhondo yamakholoni aseBrithani, esizothola kuwo Fort Williamku Isonto lombhishobhi iSan Pablo nasakhiweni se-neo-gothic se Inkantolo Ephakeme.
Ukuzicwilisa esimweni esinamandla futhi esimibalabala sedolobha kufanele uvakashele imakethe yezimbali eMullick Ghat futhi ugijimise ngendwangu nezitebele zezandla ze Imakethe eNtsha. Kuyafaneleka futhi ukwehla Umzila wePhears e-Old Chinatown (iChinatown endala). Kodwa-ke, ukujabulela isipiliyoni se-XNUMX% se-Bengali gastronomic, kufanele ume kwenye yezindawo zokudlela zendabuko ku Ipark Street.
Ukuvakashelwa okunethezekile kunikezwa yi Ingadi yaseCalcutta Botanical, lapho kukhula khona iminduze emikhulu futhi lapho sizothola khona isihlahla se-banyan emakhulwini eminyaka ubudala. Lapho ekugcineni uzothola ukuthula okuncane phakathi kwemizwa eminingi kangaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » IKolkata, phakathi kwamadolobha amahle kakhulu eNdiya